About Us - Longkou Fushi kurongedza Co., Ltd
Longkou Fushi kurongedza Machinery Co., Ltd rakaumbwa muna 1994, tanga kuita Pe furo mambure muchina uye muchero grading muchina, zvino kwakasimbiswa CE vanopupurirwa Plastic Extrusion Machinery, Vacuum Achigadzira Machine, Nezvibereko Cleaning, dzasimbiswa & Grading Machine, PS / Epe furo Sheet Extrusion Line, Epe furo Net Extrusion Line, Pe Cap Liner Foam Sheet Extrusion Line, Pe / PS Recycling uye Pelleting Line, zvachose anopfuura 20 mhando michina izvo zvikuru kushandiswa muminda zvibereko kuita & kubudiswa, fenicha chiputiriso, zvokudya, mishonga midziyo & mishonga , Erekitironi, Arts & Crafts, kuvakwa Mazinga, etc.
Zvichienderana kumusoro zvigadzirwa yepamusoro uye kwazvo pashure-okutengesa basa, kambani yedu anonakidzwa mukurumbira mukuru pakati makasitoma edu. The zvigadzirwa vari kutengesa zvakanaka zvinopfuura 20 mumatunhu ari China, uye aivigirwa kunyika dzinoverengeka uye nemaruwa. Our chakanakisisa pashure-okutengesa basa vaigona hunovimbisa dzose zvekushandisa kutsigira vatengi vedu. Tiri kufara kugamuchira epamba uye mhiri kwemakungwa neshamwari kutishanyira uye pamwe nesu.
Tiri riri Longkou City, Shandong Province, China. The motokari iri nyore chaizvo, hazvina chete 45mins kure Yantai Penglai International Airport nemotokari, uye 1.5h kubva Yantai High-nokukurumidza njanji chechitima. Uye yakabatana Qingdao chengarava.
Tinotenda kuti kubudirira yose fekitari kwedu akarondedzera chatingatevedzera michina zvatinoita zvakananga. Sezvo nheyo, kambani yedu vanobatisisa nheyo mutengi pakutanga uye unhu wokutanga, ichipa vanoshandisa vomuzana kirasi zvigadzirwa, uye kumisa ruzha rokutengesa, yokuchengetera zvinhu, pashure-okutengesa utariri, nechokwadi kuti mutengi mumwe nomumwe pfupi nguva yokuti nakidzwa zvikuru kwakakwana uye zvikuru nyanzvi pre-Sales, Sales, pashure-okutengesa basa redu. Our fekitari chikero kwakasimbiswa zvishoma nezvishoma, uye akapfuura ISO9001: 2000 yepamusoro hurongwa advertising, CE advertising, BV uye SGS advertising, redu midziyo rave richizivikanwa ari indasitiri.
We vanokwanisa okukura uye inobereka siyana PS furo zvokudya mudziyo kugadzirwa mutsetse, robhoti ruoko wokuenzanisira Vacuum Anoumba achicheka kuisira muchina uye anoumba. We ape zvemberi kugadzira nezvaanogona iripo, kusanganisira customized kugadzirwa uye machine.
Anoronga michini ndiyo ropa ane fekitari kugadzirwa. We anoramba kusuma mukuru-mugumo kubudiswa zvokushandisa, anoita kubudiswa pedyo-hwakakwana maererano yayo zvikuru zvinobetsera kugadzirwa kwacho, uye anoshandisa kucheka-kumucheto rokuongorora midziyo kuita zvakaoma inspections mumativi ose uye ari yose muitiro, kuona chigadzirwa unhu. Kunaka rakavimbika kunoratidza dzakawanda pamwero chigadzirwa.